McDonald's nisintona ny sary famantarana mampiseho ny halavirana ara-tsosialy | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Logos, Tambajotra sosialy
Nandalo tato ho ato izahay tao ambadiky ny foto-kevitr'ireo mpanakanto sasany izay nanao fihatahana sosialy noho ny coronavirus mankany amin'ireo sary malaza. Nanandrana i McDonald's, saingy tsy maintsy nifona tamin'ny farany noho ny tsy fahampian'ny tsiro.
Ny marika dia manararaotra ny fotoana voan'ny coronavirus hanome fika kely "minimal" an'ireo logoo ary ampifanaraho amin'ireo fotoana vaovao ireo. McDonald's dia nanandrana, fa araka ny hitenenanao azy dia nihemotra izy io.
Tamin'ny herinandro lasa izay McDonald's dia nandefa dokam-barotra vaovao misy ny tohany volamena roa toa nisaraka tsara izy ireo mba hanatrika ilay raharaha fanalavirana ara-tsosialy apetraky ny quarantine; Raha ny fanazavana, eto isika dia saika mandalo ireo 10 andro any Madrid, Espana.
Tsy tiako milalao McDonalds ny sary famantarana mahafatifaty anao. Maniry aho hanolotra sakafo maimaimpoana an-tapitrisany ho an'ireo izay mila izany. Tiako hovadinao amin'ny toerana fitsapana azo antoka ny fiara misy anao. Tiako ho avo roa heny ny atin'ny boaty fisakafoanana mahafaly ho an'ireo kiddos tafahitsoka ao anaty RN ianao. https://t.co/xgpf2mIaQe
La dokambarotra noforonin'ny masoivohon'ny DPZ & T, nipoitra tao amin'ny tambajotra sosialy misy an'ireo trano fisakafoanana haingam-pandeha any Brezila miaraka amin'ny teny filamatra, izay nilazana fa afaka misaraka vetivety isika mba hiaraka mandrakizay. Taorian'ny valiny ratsy avy amin'ny vondrom-piarahamonina dia voatery nesorin'izy ireo tamin'ny tambajotran-tserasera rehetra izay nanasaraka tsara ny dokam-barotra amin'ny andohalambo volamena.
Manodidina izany dia efa misy izy ireo lasa mpanakanto iray izay naneho ny heviny lehibe hevitra ho an'ny logo sasany ary iray hafa ho saraho ny litera logo Google. Hevitra famoronana, saingy tsy natao ho an'i McDonald's ary tsy nahomby ny fanaovana dokambarotra.
Fotoana tsy mifanaraka amin'ny Nisaraka ilay dokam-barotra misy ny tohany volamena ary natao ho an'ireo tambajotra sosialy hamerina izay noeritreretin'izy ireo momba izany. Azo antoka fa tsy izy no marika farany izay hanandrana manararaotra ny vanim-potoana coronavirus hanao marika. Toy ny mahazatra dia mila mitandrina tsara ianao satria ireo fikasana tsara ao amin'ny orinasa ireo dia mety hanjary fihemorana lehibe toa ny nanjo an'i McDonald's.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Tambajotra sosialy » Niala tsiny i McDonald's noho ny tsy fahampian'ny tsiro amin'ny fanovana ny sary famantarana azy